Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Dalxiisayaashu waxay helaan Phuket Nightlife si dhakhso ah ayey ku dhammaataa 9
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Nolosha habeenkii ee Phuket
Mas'uuliyiinta maxalliga ah ee Thailand ee Phuket waxay xireen meelo halis ah waxayna hakiyeen dhaqdhaqaaqyadii gudbin kara COVID-19 iyadoo nolosha habeenkii ee Phuket la xiray 9.
Hakintaan ayaa saameyneysa baararka, baararka, iyo goobaha madadaalada ee u baahan meheradaha in la xiro 9ka fiidnimo.
Waxa kale oo ku jira amarka xidhitaanka 9-ka saac makhaayadaha wax laga cuno iyo suuqyada wax laga iibsado.
Dukaammada Karaoke, garoomada feerka, beeraha qoob -ka -ciyaarka, iyo tartamada shimbiraha waa inay sidoo kale raacaan waqtiga xidhitaanka.
Guddoomiyaha Phuket Narong Woonsew ayaa saxiixay amarka ah in la xiro goobahan oo la joojiyo dhaqdhaqaaqyada faafin kara COVID-19.
Wuxuu ku daray xarumaha wax iibsiga ee maxalliga ah oo sii furnaan kara ilaa 9 -ka fiidnimo iyadoo isla markaa xaddidaya tirooyinka macaamiisha iyo hakinta howlaha xayeysiinta iyo adeegyada mashiinnada ciyaarta iyo jardiinooyinka madadaalada.
Cunitaanka maqaayadaha waa in la joojiyaa 9ka fiidnimo. Saraakiisha dawladda hoose iyo shaqaalaha ururada dawladda hoose waa inaysan ka bixin Phuket haddii aysan haysan sababo degdeg ah oo ay oggolaansho ka helaan madaxdooda.
Amarku wuxuu dhaqangalayaa maanta, 20ka Luulyo, wuxuuna soconayaa ilaa 2da Ogosto. Tallaabadan dawladdu waxay jawaab u tahay kororka kiisaska COVID-19 ee aagagga kala duwan ee Phuket.
Maxay dadku u maleeyaan
Dadka Thailand badankood (qiyaastii boqolkiiba 61) waxay u maleynayaan in xaaladda hadda ee COVID-19 aysan is-xallin doonin illaa dhowr sano ka dib, sida lagu sheegay sahan ra'yi oo ay sameysay Suan Dusit Poll.